6 Jehova wee gaa n’ihu ịgwa Mozis, sị:
2 “Ọ bụrụ na mkpụrụ obi emehie site n’imeso Jehova omume ekwesịghị ntụkwasị obi+ wee ghọgbuo+ mmadụ ibe ya n’ihe e nyere ya ka o lekọta ma ọ bụ n’ihe e nyere ya ka o debe+ ma ọ bụ ya apụnara mmadụ ihe ma ọ bụ rigbuo mmadụ ibe ya,+
3 ma ọ bụ, ya ahụ ihe furu efu+ ma ghaa ụgha banyere ya, wee ṅụọ iyi ụgha+ na nke ọ bụla n’ime ihe niile mmadụ pụrụ ime wee mehie;
4 ọ ga-erukwa na ọ bụrụ na o mehie wee bụrụ onye ikpe mara,+ ọ ga-eweghachi ihe ọ pụnaara mmadụ ma ọ bụ ihe o ji aghụghọ nara mmadụ n’ike ma ọ bụ ihe e nyere ya ka o lekọta ma ọ bụ ihe furu efu nke ọ hụrụ,
5 ma ọ bụ ihe ọ bụla ọ ṅụrụ iyi ụgha na ya, ọ ga-akwụcha ụgwọ ya,+ ọ ga-atụkwasịkwa ya otu ụzọ n’ụzọ ise nke ihe ahụ. Ọ ga-enye ya onye nwe ya n’ụbọchị e gosipụtara na ikpe mara ya.
6 Ọ ga-esi n’ìgwè ewu na atụrụ wetara Jehova ebule ahụ́ dị mma+ ka ọ bụrụ àjà ikpe ọmụma ya, dị ka ọnụ ahịa e kwuru si dị, ọ ga-ewetara ya onye nchụàjà ka ọ bụrụ àjà ikpe ọmụma.+
7 Onye nchụàjà ga-ekpuchiri ya mmehie+ ya n’ihu Jehova, a ga-agbaghara ya nke ọ bụla n’ihe niile o mere bụ́ nke mere o ji bụrụ onye ikpe mara.”
8 Jehova wee gaa n’ihu ịgwa Mozis, sị:
9 “Nye Erọn na ụmụ ya iwu, sị, ‘Nke a bụ iwu metụtara àjà nsure ọkụ:+ Anụ àjà nsure ọkụ ga-adị n’ekwú ebe ịchụàjà abalị dum ruo ụtụtụ, a ga-emekwa ka ọkụ nke ebe ịchụàjà na-enwu.
10 Onye nchụàjà ga-eyiri uwe ọrụ ya nke e ji linin mee,+ ọ ga-eyiri uwe úkwù+ yichie anụ ahụ́ ya. Ọ ga-ekpopụkwa ntụ nke ya na abụba gwakọtara+ bụ́ nke si n’àjà nsure ọkụ nke ọkụ na-erepịa mgbe niile n’elu ebe ịchụàjà ma kposa ya n’akụkụ ebe ịchụàjà.
11 Ọ ga-eyipụ uwe ya+ yiri uwe ọzọ, ọ ga-eburukwa ntụ ahụ ya na abụba gwakọtara gaa n’ebe dị ọcha ná mpụga ebe ha mara ụlọikwuu.+
12 A ga-emekwa ka ọkụ ebe ịchụàjà ahụ na-ere. Ọ gaghị anyụ anyụ. Onye nchụàjà ga na-esonye nkụ+ na ya kwa ụtụtụ ma na-edo anụ àjà nsure ọkụ n’usoro n’elu ya, ọ ga-esurekwa abụba niile nke anụ àjà udo n’ọkụ n’elu ya.+
13 A ga-eme ka ọkụ+ na-ere n’elu ebe ịchụàjà mgbe niile. Ọ gaghị anyụ anyụ.
14 “‘Nke a bụ iwu metụtara àjà ọka:*+ Unu bụ́ ụmụ Erọn, wetanụ ya n’ihu Jehova n’ihu ebe ịchụàjà.
15 Otu n’ime ha ga-ekpoju ntụ ọka nke àjà ọka ahụ e gwere nke ọma ọbụ aka ya, ya na mmanụ ya na frankinsens niile a tụkwasịrị n’elu àjà ọka ahụ, ọ ga-esurekwa ya n’ọkụ n’elu ebe ịchụàjà dị ka àjà na-esi ísì ụtọ nye Jehova, ka o wee bụrụ ihe ncheta ya.+
16 Erọn na ụmụ ya ga-erikwa ihe fọdụrụ na ya.+ A ga-anọ n’ebe dị nsọ rie ya n’ụdị achịcha na-ekoghị eko.+ Ha ga-anọ n’ogige ụlọikwuu nzute rie ya.
17 A gaghị etinye ya ihe na-eko achịcha wee ghee ya.+ Enyewo m ha ya ka ọ bụrụ òkè ha n’àjà a na-esurere m n’ọkụ.+ Ọ bụ ihe kasị nsọ,+ dị ka àjà mmehie nakwa dị ka àjà ikpe ọmụma.
18 Nwoke ọ bụla+ n’etiti ụmụ Erọn ga-eri ya. Ọ bụ òkè ha, ruo mgbe a na-akaghị aka+ n’ọgbọ unu niile, n’àjà a na-esurere Jehova n’ọkụ. Ihe ọ bụla metụrụ ha ga-adị nsọ.’”
19 Jehova wee gaa n’ihu ịgwa Mozis, sị:
20 “Nke a bụ àjà+ Erọn na ụmụ ya ga-achụrụ Jehova n’ụbọchị a ga-ete ya mmanụ:+ otu ụzọ n’ụzọ iri nke otu ihe ọ̀tụ̀tụ̀ efa+ ntụ ọka e gwere nke ọma ka ọ bụrụ àjà ọka a na-achụ+ mgbe niile, otu ọkara n’ụtụtụ na otu ọkara ná mgbede.
21 A ga-eji mmanụ gwọọ ya wee ghee ya n’ite e ji eghe ihe.+ Ị ga-agwọ ya nke ọma wee weta ya. Ị ga-eweta àjà ọka ahụ e ghere eghe n’iberibe n’iberibe ka ọ bụrụ ihe na-esi ísì ụtọ nye Jehova.
22 Onye nchụàjà, bụ́ onye e tere mmanụ ịnọchi ya site n’etiti ụmụ ya,+ ga-eme ya. Ọ bụ ụkpụrụ ga-adịru mgbe a na-akaghị aka: A ga-esurere ya Jehova n’ọkụ ka ọ bụrụ àjà a na-esurecha n’ọkụ.+
23 Àjà ọka ọ bụla onye nchụàjà na-enye+ ga-abụ àjà a na-esurecha n’ọkụ. A gaghị eri ya eri.”
24 Jehova wee gwa Mozis okwu ọzọ, sị:
25 “Gwa Erọn na ụmụ ya, sị, ‘Nke a bụ iwu metụtara àjà mmehie:+ N’ebe+ a na-egbu anụ àjà nsure ọkụ ka a ga-anọ gbuo anụ àjà mmehie n’ihu Jehova. Ọ bụ ihe kasị nsọ.+
26 Onye nchụàjà nke chụrụ ya n’àjà maka mmehie ga-eri ya.+ N’ebe dị nsọ+ ka a ga-anọ rie ya, n’ogige+ ụlọikwuu nzute.
27 “‘Ihe ọ bụla metụrụ anụ ya ga-adị nsọ,+ mgbe mmadụ fesakwara ọbara ya n’uwe,+ ị ga-anọ n’ebe dị nsọ+ sụọ ihe o fesara ọbara.
28 A ga-akụrikwa ite ụrọ+ e ji sie ya. Ma ọ bụrụ na e ji ite ọla kọpa sie ya, a ga-ekwocha ya ekwocha ma jiri mmiri ṅachaa ya.
29 “‘Nwoke ọ bụla so ná ndị nchụàjà ga-eri ya.+ Ọ bụ ihe kasị nsọ.+
30 Otú ọ dị, a gaghị eri anụ àjà mmehie nke e webatara ọbara+ ya n’ụlọikwuu nzute iji kpuchie mmehie n’ebe nsọ. A ga-akpọ ya ọkụ.
^ Le 6:14*
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D3%26Chapter%3D6%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl